Vaovao - Ny Expo fahenina an'i Shina-Russia, Harbin, Sina
Ny Expo Sinaina-Rosia fahenina, Harbin, Sina
Harbin Iraisam-pirenena sy varotra iraisam-pirenena Harbin (nohafohezina ho HTF), natsangana tamin'ny taona 1990, dia notontosaina tamim-pahombiazana nandritra ny 29 taona misesy. Miaraka amin'ny tanjon'ny "Fanasongadinana an'i Rosia, fiatrehana an'i Azia avaratra atsinanana, fampielezana izao tontolo izao, fanompoana manerana an'i Shina", ny HTF dia iray amin'ireo fampirantiana lava indrindra natao tany Chine, ary koa ny varavarankelin'i Shina hampivelarana ny tsena iraisam-pirenena isan-karazany ary zava-dehibe sehatra fiaraha-miasa isam-paritra Azia Avaratra Atsinanana. Tamin'ny 2014, ny HTF dia navaozina tamim-pahombiazana ho Expo China-Russia, izay natao nandritra ny dimy taona nifanesy.
Ny 30faha Harbin iraisam-pirenena ara-toekarena sy varotra iraisam-pirenena Harbin dia hatao ao amin'ny Harbin International Exhibition and Sports Center manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 Jona 2019. Miaraka amin'ny sehatry ny fampiratiana 86,000㎡, dia manangana International sy Hong Kong, Macao ary Taiwan Pavilion, Fiaraha-miasa China-Russia Pavily, Masinina ary vokatra elektrika Pavilion, faritra fampiratiana masinina lehibe sns. Ny fampirantiana dia mandrakotra ny valin'ny tetikasa harena an-kibon'ny tany, ny fambolena maoderina, ny famokarana fitaovana, ny aérospace, ny varotra e-commerce, ny varotra serivisy sns. Andiana fifanakalozana ara-toekarena sy ara-barotra, fifampiraharahana ary fanaovana lalao, fanaovana dokambarotra, toy ny forum, fihaonambe no hatao amin'izany.
Ny HTF dia hampidirina lalina ao amin'ny "Belt and Road Initiative", hanangana tany malalaka ho an'ny koperativa misokatra, hanome ny tombony feno ny tombotsoan'ny toerana any Avaratra atsinanan'i Azia, manasa ny governemanta sy ny orinasa erak'izao tontolo izao handray anjara amin'ny fampirantiana ary hampiroborobo ny fifanakalozana fifanakalozana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, renivohitra ary teknolojia.
Asaina am-pitiavana ianao handray anjara amin'ny 30faha Harbin Trade Fair hizara tombontsoa amin'ny asa aman-draharaha sy hikatsahana ny fampandrosoana iraisana. Hanolotra serivisy maneran-tany sy kalitao ho an'ireo mpampiranty avy any ivelany sy any ivelany izahay.
Fotoana fampirantiana: 8: 30-17: 00 15 hatramin'ny 18 Jona 2019
8: 30-14: 00 Jona 19, 2019
Fotoana fidirana amin'ny fampiratiana: 7:30 Jona 15, 2019
8:00 16 hatramin'ny 19 Jona 2019
Andro fifampiraharahana ho an'ireo mpitsidika matihanina: 15 Jona 2019
Andro fanokafana ampahibemaso: 16 ka hatramin'ny 19 Jona 2019
Ivontoerana fampirantiana sy fanatanjahantena Harbin Iraisam-pirenena
(No. 301 Hongqi Str., Nangang Distr., Harbin, Sina)
86,000 ㎡ (tranoheva iraisam-pirenena 3000)
FANAMBARANA AMIN'NY PAVILION SY FARITRA FAMPISEHOANA
Pavilion iraisam-pirenena, Hong Kong, Macao ary Taiwan
Teknolojia avo lenta sy vaovao, vokatra manokana isam-paritra, fampiasam-bola sy tetikasa fiaraha-miasa, fifanakalozana kolontsaina sns sns avy any ivelany sy Hong Kong, Macao, Taiwan.
Pavilion amin'ny fiaraha-miasa amin'i Sina sy Russia
A. Faritra misy ny sary nasionaly Rosiana. Asehoy ny endrika nasionaly Rosiana ary koa ny fiaraha-miasa eo amin'ireo orinasa lehibe, ireo Oblast ary Faritra mifandraika amin'i Shina.
B. Faritra iaraha-miasa amin'ny faritra China-Russia. Asehoy ny toe-javatra ankapobeny amin'ny indostria manankarena sy ny fampandrosoana eo an-toerana ny faritany sinoa (tanàna) ary ireo faritra Rosiana (faritra)
C. Faritra fampirantiana lohahevitra. Mampiseho tanteraka ny valin'ny tetik'asa fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta ny sehatra sinoa sy rosiana amin'ny sehatra lehibe toy ny fiaraha-miasa amin'ny mineraly, fambolena maoderina, fanamboarana fitaovana, aérospace, e-commerce cross-border, indostrian'ny kolotsaina ary fotodrafitrasa.
D. Faritra famelomana aina feno. Mampiseho fanabeazana siansa sy teknolojia, serivisy ara-bola, fizahan-tany sy kojakoja amin'ny orampanala sy ranomandry, fikarakarana ara-pahasalamana, fivarotana vaovao sy fanjifana vaovao, fitaovam-pananganana vaovao ao amin'ny faritanin'i Heilongjiang.
Masinina sy vokatra vita amin'ny herinaratra (Trano fampirantiana)
Fonosana sy fanontam-pirinty, milina plastika, milina fanaovana hazo, fitaovana fanodinana rano, làlana, tetezana, milina fananganana sy fitrandrahana harena ankibon'ny tany, milina fanodinana sakafo sy famonosana, fitaovana enti-mandeha amin'ny fiara, fitaovam-pitaterana, fitaovana fampitaovana sy teknolojia ary vokatra hafa amin'ny milina.
Faritra fampiratiana masinina lehibe (faritra anaovana fampirantiana ivelany)
Masinina fanamboarana, milina fambolena sy ala, haitao sy angovo biomassa, fiara mpandeha sy mpitatitra entana lehibe, fiara mpandeha, fitaovana fiarovana tontolo iainana munisipaly, fitaovana vonjy taitra, fialamboly ivelany sns.
ASA HEVITRA AMIN'NY BUSINESS
Mandrindra ny dinika, seminera ary hetsika hafa momba ny fambolena, ala, milina, e-varotra, fahazoan-dàlana, logistik fitaterana, fizahan-tany ara-kolotsaina, fifanakalozana tanora, fampiroboroboana ny vokatra, vokatra mekanika; Mandritra izany fotoana izany, "The 30fahaFitsingerenan'ny hetsika HTF "sy andiana hetsika ara-toekarena sy varotra iraisam-pirenena manokana, siansa ary teknolojia, hetsika fifanakalozana kolontsaina.
Ireo mpampiranty dia afaka misoratra anarana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy (www.chtf.org.cn), ny fe-potoana farany fisoratana anarana dia ny 30 aprily 2019.
A. Hall A, B ary C
1. Ny foibe iraisam-pirenena 9㎡ （3m × 3m） dia misy $ 1.500 isaky ny fampirantiana. Ny booth isaky ny fenitra anatiny dia araraotina amin'ny takelaka fampiratiana 3, latabatra, seza 3, jiro 2, tsanganana herinaratra 220V / 3A (ao anatin'ny 500W), takelaka misy lintel misy anarana sinoa sy anglisy an'ny fampirantiana.
2. Trano haingo 9㎡ （3m × 3m） voaravaka haingon-trano izay mitaky 36㎡ mandritra ny fampirantiana ary ampitomboina 9㎡ dia misy $ 1,900 isaky ny fampirantiana. Ny booth stand tsirairay voaravaka anaty trano dia ampiasaina amin'ny takelaka fampirantiana 3, latabatra, seza 3, karipetra, jiro 2, fitoeran-jiro 220V / 3A (ao anatin'ny 500W), takelaka misy lintel misy anarana sinoa sy anglisy an'ny exhibitor.
3. Tany tsy misy fampirantiana anaty trano dia misy amin'ny US $ 155 / ㎡ miaraka amin'ny fepetra farafahakeliny 36㎡ mandritra ny fampiratiana ary hampiakarana 18 by, tsy misy fitaovana fampirantiana.
B. Masinina sy vokatra elektrika Pavilion Tent Trano fampirantiana）
Ny 9㎡booth tsirairay dia mitentina 900 $ US mandritra ny fampirantiana. Ny booth tsirairay dia ampiasaina miaraka amin'ny takelaka fampirantiana 3, latabatra, seza 3, jiro 2, fitoeran-jiro 220V / 3A (ao anatin'ny 500W), tabilao misy lintel misy anaran'ny sinoa sy anglisy an'ny fampirantiana.
C. Ny faritra fampirantiana ivelany dia misy amin'ny US $ 30 / ㎡ mandritra ny fampirantiana, ny faritra farafahakeliny hofan-trano dia 50㎡, tsy misy fampirantiana sy famatsiana herinaratra.
1. Angatahina aminao mba hamerina ny hofan-trano ho an'ny trano rantsan-kazo alohan'ny 15 May 2019. Ny fahatarana amin'ny famoahana ny hofan-trano etsy ambony dia horaisina ho fisintahana an-tsitrapo amin'ny fampirantiana, ary havaozina ho anao ny tranoheva.
2. Mpandray karama: Biraon'ny fitantanan-draharahan'ny China Harbin ara-toekarena sy varotra
3. Banky kaonty amin'ny dolara amerikana: Bank of China, Sampana Heilongjiang
4. Ampiana: No. 19 Hongjun St., Nangang Dist., Harbin China
5. Isa kaonty: 166451764815
6. CODE SWIFT: BKCHCNBJ 860
1. Karatra fampirantiana: ny booth mahazatra rehetra (9㎡) dia manamora karatra 3, isaky ny faritra fampirantiana 50㎡ any ivelany dia manamora karatra 6.
2. Booth Setup sy Card manala: 30 yuan no sarany isaky ny karatra. (Fanamarihana: Ireo mpikatroka dia mety mihetsika ary mandrava amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny karatra fampirantiana)
3. Booth Setup sy Card fanesorana ho an'ny fiara: ny fiara ho an'ny fampiratiana fampiratiana sy ny fanaparitahana 50 yuan fotsiny dia voadidy isaky ny karatra
4. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny http://www.chtf.org.cn
SETUP BOOTH SY NY famoahana
1. Fotoana fananganana booth sy famoahana fotoana:
08:00 8 hatramin'ny 12 Jona: 00 Jona 14: fananganana booth haingo-tena
08:00 12 hatramin'ny 12 Jona: 14 Jona 14: fananganana booth mahazatra
12:00 Jona 14: Hakatona ny efitrano fampirantiana hijerena ny fiarovana
15:00 19-18 Jona: 00 Jona 20: Fandravana ny booth
2. Ny fametahana tranoheva haingo-tena dia mampiorina ny mekanisma fidirana amin'ny fananganana ary manaraka fatratra ny "Fepetran'ny fananganana sy ny fitantanana endrika an'ny Expo China-Russia Expo". Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny http://www.chtf.org.cn
3. Ho an'ny booth haingo-tena, ny asa fanamboarana rehetra dia hatao eny ivelan'ny efitrano fampirantiana ary mety mivory ao amin'ny efitrano. Ny haavon'ny fampirantiana ho an'ny efitrano anatiny dia mety tsy mihoatra ny 6 metatra.
4. Azafady mba ampidiro aminay ny drafitry ny gorodona fananganana ny booth mahazatra na ny fandravana ny tabilao fitokana-monina eo anelanelan'ny trano heva amin'ny Komitin'ny Organisation ny Expo alohan'ny 31 Mey. Raha misy fanovana atao aorian'ny fahavitan'ny trano rantsan-kazo dia tsy hatao ny asa fananganana raha tsy ekena ny fangatahana ary andoavam-bola fanampiny aorian'ny 8 Jona.
5. Mandritra ny fananganana booth dia tsy azo atao ny mibodo ny habaka ampahibemaso na manakana ireo fitaovana fanoherana ny afo. Ireo mpanentana dia tsy maintsy manadio ny fanary sy ny fonosana eo no ho eo.
6. Tsy mahazo miditra ny fampirantiana mandritra ny foara.
1. Ny fampirantiana dia tokony hanome serivisy ho an'ny fampiratiana sy mpitsidika toy ny fifampidinihana, fifampiraharahana amin'ny varotra, famoahana vaovao momba ny famatsiana sy fangatahana amin'ny Internet, sns.
2. Ny fampirantiana dia tokony hanome serivisy ho an'ireo mpampiranty toy ny famandrihana hotely, hampiasa mpandika teny, fanofana fiara, fitsangatsanganana sns.
3. Ivotoerana misy ny serivisy ao amin'ny pavilion dia manolotra ireto tolotra manaraka ireto: fanofana trano fampirantiana, paositra, tapakila, banky, fifandraisana, tamba-jotra, ivon-toeram-pandraharahana, sns.
4. Sampan-draharaha sasany toy ny fadin-tseranana, ny fisafoana ary ny Quarantine, ny indostria sy ny varotra, ny fanaraha-maso kalitao, ny zon'ny fananana ara-tsaina, ary ny lalàna no manome serivisy eo an-toerana, izay misy ny fifampidinihana ara-dalàna sy politika, mandamina ny olana sy ny fifanolanana mandritra ny fampiratiana.
5. Ny Fampirantiana dia hanome serivisy ho an'ireo mpampiranty toy ny fananganana sy ny fikojakojana ny tranokala orinasa, ny fangatahana fampahalalana momba ny fampiratiana sns ... Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny http://www.chtf.org.cn
Ny komity mpikarakara dia manome serivisy lozisialy fampirantiana ho an'ireo mpampiranty.
Fifandraisana: Ramatoa Chen Liping
Ny Fampirantiana dia hanome serivisy fanaovana dokambarotra ho an'ireo mpampiranty, indrindra ny fanaovana dokam-barotra ao amin'ny efitrano fampirantiana, ny làlambe misy an'i Harbin, ny boky misy ny boky, ny tapakila fidirana ary ny tranonkala ofisialy.
Fifandraisana: Andriamatoa Zhang Jianxun
Tel: + 86-451-82273912 izay13351780557
Fandraisana an-tanana ny mpiara-miasa SPONSORSHIP
Fifandraisana: Andriamatoa Wang Zhijun
Tompon'andraikitra amin'ny dokambarotra sy ny fampiroboroboana ireo mpampiranty, ny tatitra mavitrika ho an'ny fampirantiana; Alamino ireo resadresaka manokana miaraka amin'ireo vahiny manan-danja sy mpitarika orinasa amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao mahazatra ao an-trano sy any ivelany.
Fifandraisana: Ramatoa Zhang Yuhong
Fifandraisana: Ramatoa Liu Yang
Birao Fifanarahana sy fampirantiana Heilongjiang
Manampia: No.35 Meishun St., Nangang Dist., Harbin China 150090